May Nyane: တောသူ
ဒီ တောသူ ၀တ္ထုလေးက ညီမကို တကယ် ဖမ်းစားသွားတယ်။ သစ်ခေါင်းလေးထဲက ထိလွယ်ရှလွယ် ကြေမွလွယ်တဲ့ … ပင့်ကူမျှင် အထပ်ထပ်နောက်မှာ ရိနွမ်းနေတဲ့ …. မှိုပွင့်လေးဘ၀ကို စာနာစိတ်နဲ့ မြင်ယောင်တွေးမိတယ်။
အခုတော့ … မှိုပွင့်ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် … ။
ဒီဝတ္ထုထဲက ညီမ နှစ်ခြိုက်မိတဲ့ စာသားလေးတွေက ….
“တကယ်တော့ ၀တ္ထုဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ဦးနှောက်နဲ့ စီခြယ်မွမ်းမံပြထားတာပါ”။
အနုပညာဖန်တီးသူအတွက် အမည် ပညတ် သတ်မှတ်ချက် မလို။ ဆိုင်းဘုတ် မလို ဟု ကျမ ယုံသည်။ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည် ဟုလည်း ယုံသည်။”
“ထိုအခါ ကျမ၏ အသည်းနှလုံးဆီမှာ ဂန္ထ၀င်(Classics) မရှိ၊ မော်ဒန် အနုပညာ(Modern Art) မရှိ။ ဘာ သတ်မှတ်ချက်၊ ဘာ ပုံစံ၊ ဘာ Ism မှ မရှိ။ မလိုအပ်။ တစ်ခုပဲ လိုသည်။ ရင်ထဲ၊ ဦးနှောက်ထဲဆီက တားမနိုင် ဆီးမရ၊ ပွင့်ထွက်လာသော ဖန်တီးလိုမှု စစ်စစ်သာ လိုသည်”
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ … ။
'ထိုအခါ ကျမ၏ အသည်းနှလုံးဆီမှာ ဂန္ထ၀င်(Classics) မရှိ၊ မော်ဒန် အနုပညာ(Modern Art) မရှိ။ ဘာ သတ်မှတ်ချက်၊ ဘာ ပုံစံ၊ ဘာ Ism မှ မရှိ။ မလိုအပ်။ တစ်ခုပဲ လိုသည်။ ရင်ထဲ၊ ဦးနှောက်ထဲဆီက တားမနိုင် ဆီးမရ၊ ပွင့်ထွက်လာသော ဖန်တီးလိုမှု စစ်စစ်သာ လိုသည်ဟု ကျမ ရင်ဖွင့်ချင်ပါသည်။"
တော်တော် တူနေတယ်။ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ရေးနေတုန်း မမေဓာဝီ ကွန်မန့်က တက်သွားပြန်တယ်။
အနုပညာဖန်တီးသူ၏ အလုပ်သည် ဖန်တီးရန်သာ။ အမည်ပညတ် သတ်မှတ်သည့် ပညာရှင်များလည်း သူ့အလုပ် သူလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။ အနုပညာကရှေ့ကသွား ပြီး အမည်ပညတ်က နောက်ကလိုက်မည်။ trend ဖြစ်လာ တော့လည်း ism ဖြစ်သွားမည်။ ဒီလိုနဲ့ ism အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ပေါ်လာမည်။ စစ်မှန်သော အနုပညာတစ်ရပ်ကို "တကူးတက" ဆိုသော စကားလုံးမျိုးနှင့် တော့ မဆက်စပ်တတ်ရိုး အမှန်ပါ။ ကိုယ်ဥာဏ်မီသလောက် တွေးကြည့်မိတာပါ ဆရာမရေ။
ကျနော် အနှစ်သက်ဆုံးကတော့ -
ဆိုတဲ့ စာသားကိုပါပဲ။ အနုပညာဆိုတာ ဂန္တ၀င်၊ မော်ဒန်ရယ်လို့ ဘာသတ်မှတ်ချက်မှ မရှိ၊ ဖန်တီးလိုမှုက အဓိက ဆိုတာကို ဖော်ကျူးနေတဲ့ စကားလုံးတွေအကြားမှာပဲ ပြုံးချင်စရာ ထေ့ကွက်ကလေး တခုလို့ မြင်မိတယ်။
ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသော အနုပညာကို ကိုယ့်ဘာသာ နာမည်တပ်ခြင်းမျိုး။ ဒါမှမဟုတ် နာမည်တပ် ပြီး သား အနုပညာ ပုံစံတစ်ရပ်၏ နောက်က လိုက်ခြင်းမျိုးကို မကြိုက် ဆိုတဲ့ စကားကိုလဲ အားရပါးရကြီး ထောက်ခံချင်တယ်။ ကိုယ့်အနုပညာကို ဒါဟာ ဘာပါ လို့ ပြောဖို့က ဖန်တီးသူရဲ့ အလုပ်မဟုတ်၊ ခံစားဖတ်ရှုသူရဲ့ သတ်မှတ်မှုလို့သာ ကျနော်လဲ မြင်မိလို့ပါပဲ။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် လွတ်လပ်မှုခြင်းရဲ့ အရသာကို လိုချင်တဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ ကျေးဇူးဆရာမ